Ukuhlanganiswa Kokhonkolo, i-Sodium Gluconate, i-Sodium Lignosulphonate - i-Chengli
Binzhou Chengli zokwakha Co., Ltd. itholakala ebuhleni obuhle be-Yellow River Delta Center City-Binzhou, enyakatho neChina. yethu inkampani ngokomsebenzi ezikhethekile inqubo yokukhiqiza,ucwaningo,ukuthuthukiswa, nokuthengisa kokuhlanganiswa okukhonkolo.
(CL-WR-50) I-Polycarboxylate superplasticizer 50% ...
I-CL-DA iyisithunywa esichitha igama
I-CL-AEA ejenti yokufaka umoya
Ngokusho izidingo zakho, ngezifiso ngawe, futhi ukukunikeza wit
I-Binzhou Chengli Building Materials Co., LTD ihlala inamathela kukhwalithi njengesisekelo, emisha njengamandla, futhi ilwela ukuhola ukhonkolo umholi wemboni. Ubuqotho, amandla nekhwalithi yenkampani yethu ithola ukwamukelwa kwemboni.
082021 / Ephreli
IPolycarboxylate superplasticizer yi-thrid yesizukulwane sikakhonkolo superplasticizer ethuthuke isuka kuhlobo lwe-lignosulfonate calcium nohlobo lwe-naphthalene superplasticizer. I-Polycarboxylate superplasticizer iyi-modify superplasticizer ekhonkolo ecwaningwe yi-technology.it entsha i-envi eluhlaza ...
072021 / Ephreli
Umehluko phakathi kokwehlisa amanzi kohlobo lwe-polycarboxylate superplasticizer nohlobo lokugcinwa kweslump
Amafektri amaningi okuxubana kokhonkolo anakho kokubili ukunciphisa uhlobo lokunciphisa amanzi lwe-polycarboxylate superplasticizer nohlobo lokugcinwa kokuwa, kepha yini umehluko wokusetshenziswa phakathi kwazo? Lapho okokusebenza kwakho kokhonkolo kufana nosimende, okuhlanganisiwe nesihlabathi kuhle ngokwanele, uhlobo lokunciphisa amanzi kuphela i-polycarboxylate superplasticizer ...
092020 / Septhemba
Ithonya lokuvikelwa kwemvelo ekuxubeni kokhonkolo
Elinye ikhasimende lethu langibuza: 'kuhamba kanjani umkhiqizo wakho? Kusalungile? lokho kungenza ngibone ukuthi ukuvikelwa kweChina kwezeMvelo sekuvele kunomthelela omkhulu kumkhiqizo wamakhemikhali njengokuhlanganiswa kokhonkolo eChina. Ake ngikwazise kusukela ekuqaleni. Njengoba sonke sazi, iChina ithuthukisa kakhulu ...